Ubuntu 16.04 vs Windows 10: kuongorora uye kumisikidza nhanho nhanho | Linux Vakapindwa muropa
Yakatosvika Ubuntu 16.04 LTS kubva kuCanonical sezvamunoziva mese, uyezve iyo sisitimu yekushandisa yave iri pamusika kwechinguva Microsoft Windows 10 kuti avo veRedmond varipo seimwe yeakanakisa Windows enguva dzichangopfuura uye mavakaisa tariro huru yekushandura mafungiro evashandisi vazhinji vasingafare netsikidzi dzakadai seWindows Vista kana Windows 8 dzavasina kufarira.
Zvatichaita muchinyorwa chino zvichave ongorora kumwe kuratidzika yeese ari maviri mashandiro ekushandisa uye tinopa maonero edu kuti akakosha here, pamusoro pekuita mamwe mabvunzo akareruka nemamwe mabasa ezuva nezuva ayo isu tese atinoita zuva nezuva zuva nezuva pane ese masisitimu kutarisa mashandiro evaviri. Kunze kweizvi, kana iwe usiri kusarudza imwe yevaviri kana kungoda kunakidzwa neruzivo mune zvese izvi, isu tinokuratidza maitiro ekuzviisa pakombuta imwechete (dualboot) nhanho nhanho.
1 Kutanga kuratidzwa
2 Kune vagadziri: Windows 10 uye Bash
3 Kuenzanisa kwekuita
4 Kuisa Windows 10 padivi peUbuntu 16 (iine uye isina UEFI)
4.1 Windows 10 uye saizi
4.2 Dhawunorodha Ubuntu uye gadzira iyo yekuisa midhiya
4.3 Maitiro eBIOS
4.4 Kuisirwa Ubuntu 16.04 LTS kana yako distro ...
Windows 10 zvave nani zvakati wandei zvichienzaniswa neshanduro dzakapfuura, ichokwadi. Pamusoro pezvo, avo veMicrosoft vadzosera iyo yekutanga Muterere menyu kune iyi vhezheni sevashandisi vaida mushure mekuona kuti hazviite sei Windows 8 interface. Kune rimwe divi, haisi iyo inorema vhezheni yeWindows uye izere nezvikanganiso senge Yaive Windows Vista, saizvozvowo chengetedzo yakagadziridzwa zvakanyanya.
Chinhu chakanyanya kushata nezve Windows 10 pamwe kuenderana kana iwe ukavimba nesoftware yekare, kunyangwe hapanofanirwa kuve nematambudziko akawandisa neizvi. Asi chakanyanya chikamu ndechekuti kuvanzika uye kusazivikanwa yemushandisi weiyi OS, iyo isipo isingaite pamwe nehuwandu hweanoshanda kuunganidza dhata dzakabatanidzwa mushanduro yegumi yeWindows uye nekugumbura kwavanogona kuita kana kutova nenjodzi mune dzimwe pfungwa dzine chekuita nekuchengeteka.
Isu takatonyora mune ino blog huwandu hwemabasa ayo Windows 10 Zvinounzwa zvakagadziriswa nekutadza uye izvo zvinogona kupa kutyisidzira kuvanzika kwemushandisiIzvo zvaitove nerunyerekupe pamwe nekugona kunyunyuta kubva kumapoka evashandisi kuenda kukambani yeMicrosoft yeizvi Windows 10. Zvisinei, izvi zvinoita sekunge hazvina kuzadzikiswa uye pakupedzisira hazvina kuitwa.
Ubuntu 16.04 LTS yasvika nekuvandudza Kunyangwe hazvo paine pasina akawanda, tinogona kuona kuti iyo inotangisa inogona kuiswa pazasi pasina kunetsekana kukuru, nekungoita rairo uye pasina kuisa chero chinhu. Kana iwe uchida iyo yekuvhura pazasi zvimwe, iwe unogona kuitora nekungonyora nekuteedzera zvinotevera mune terminal.
Kana iwe uchida kuchinjisa icho, ingo dzoreredza rairo kuraira uchichinja "Pazasi" kuenda "Kuruboshwe" pasina makotesheni.
Kuenderera mberi neshanduko, taura kuti pane shanduko dzakadzika dzisingaonekwe, sezvo kugadzirisa zvipembenene, zvinoonekwa iyo nyowani Ubuntu Software Center inova ndiyo yakatumidzwa zita rekuti GNOME Software Center, iyo inokosheswa nekutsvedza uko yapfuura software yepakati yakanga yawira mairi. Iko kune zvakare nyowani kernel vhezheni uye yakazara yakagadziridzwa mapakeji.
Saizvozvowo, iyo GNOME Desktop Chalenda, kuvandudzwa mumidziyo yekuisa yeUSB, uye zvimwe zvikamu zvakapenya izvo zvakange zvisati zvashanda sezvavaifanirwa kunge zvakabatanidzwa. Izvo zvakare iri nyore nyore distro uye nenharaunda yakakura kumashure izvo zvinokubatsira kugadzirisa kusahadzika kupi zvako nedzidziso uye zvakadzama zvinyorwa kuitira kuti kunyangwe kuve novice harisi dambudziko kutanga kushandisa kugoverwa kweLinux.
Kupokana ndinofanira kutaura izvozvo zvakandidzikisira zvishoma chii chiri kutora mukusvika iko kusangana kwakavimbiswa neCanonical uye kuti zvinoita sekunge kuri kuzeza kumhara zvachose. Ndinovimba kuti kana yave 100% yakagadzirira inosvika nesimba uye nehunyanzvi, kunyangwe ini ndisingazive kana Ubuntu Foni inogona kuita chirongwa chinonakidza nesimba rakakura iro Google's yeApple neApple yeIOS mune nharembozha chikamu ... uye Ndiri kutya kuti chinhu chimwe chete ichi chikaitika kwauri seFirefoxOS.
Iniwo ndinofanira kutaura ndichipesana neizvozvo Ndakanetswa neiyo icon yeAmazon kuti ivo vanoramba vachichengeta muchigadziro chemari yemari yandinofungidzira kuti huru chitoro chepamhepo ichapinda Canonical yekuita kuti ichi chirongwa chishandiswe musystem yavo nekutadza. Nekudaro, inogona kubviswa zviri nyore, asi ini handina kuifarira uye ndicho chimwe chezvinhu zvekutanga zvandakaita mushure mekuisa Ubuntu 16.04 LTS pakombuta yangu.
Kune vagadziri: Windows 10 uye Bash
Windows 10 yakabatanidza Bash uye zvikamu zveiyo Ubuntu nharaunda pamwe neazvino kuvaka. Microsoft yaida kugadzira iyi nyowani nyowani kune vanogadzira avo vanoda kugadzirira Ubuntu nekuwedzera uku mukuvandudzwa kwesystem yazvino. Kunyangwe ndichifunga kuti yakagadzira kangaidziko pakati pevamwe vashandisi vachitenda kuti Ubuntu "yakaunzwa" mukati Windows 10 uye izvi hazvisizvo, chinongova chikamu chekukwanisa kupa chikuva chekuvandudza.
Zvinonakidza here kusarudza Windows 10 kana iwe uri mugadziri? Zvakanaka, uyu mubvunzo unonetsa kupindura, nekuti kana iwe uchida kugadzira yeWindows zviri nani kana iwe uine Microsoft inoshanda sisitimu uye kana iwe uchida kuzviitira Linux zviri nani kuva ne distro. Asi kana iwe uchida kugadzira mapuratifomu akawanda, kunyange ini ndichiri kufunga izvozvo zvirinani kuve nema native operating system, inhanho huru yekugona kugadzira iyo Linux kubva paWindows.
Haisi nekuti iri blog yeLinux, asi ini ndinoona ichi seyakagadziriswa decaffeine neMicrosoft uye inofananidzwa ne iyo unease yakasara neWindows 10 IoT Core yeRaspberry Pi iyo vazhinji vanofunga nezvekachipa Windows 10 komputa uye voona kuti iri sisitimu yakakosha inoda Windows 10 komputa kuti ishande uye inoshanda chete kune vanogadzira, isingabatsire vashandisi vekupedzisira.
Zvakanaka, timu yawira mumaoko angu ASUS F552EP Laptop mandiri ndakaisa Windows 10 uye Ubuntu 16.04 LTS, zvakanaka, ini ndakaisa Ubuntu kuti ive nemaitiro maviri mune mbiri mbiri muchikamu chinotevera tinotsanangura maitiro ekuzviita nhanho nhanho. Saka hapana mubvunzo kuti iyo hardware yakafanana kune ese uye hapana chekubata kana kadhibhodhi. Ini handina kushandisa benchmark software, pachinzvimbo ini ndakaronga chaizvo zuva nezuva uye zvakakosha mabasa kuti uone mashandiro anoratidzwa neese mahurongwa.
El Hardware midziyo yekutanga ndeye:
500GB Magnetic Akaomarara Dhiraivha
OS (dualboot): Ubuntu 16.04 LTS 64-bit / Windows 10 Imba 64-bit
Mhedzisiro yawanikwa Mune yangu chaiyo bvunzo, iyo isiri yehunyanzvi zvachose, iri kungoita mamwe mabasa anoitwa nevashandisi mazuva ese kuti vaone nguva yainotora mune ese masystem, ndeaya:
Sisitimu yekutanga 01'07 "0 00'49 "62
Sisitimu yekudzima 00'20 "22 00'08 "86
20MB ZIP kudzvinyirira 00'02 "94 00'02 "56
Kuvhura Mozilla Firefox 00'02 "84 00'03 "60
Chinjana 200MB kubva kune imwe poindi kuenda pane imwe pane hard drive 00'10 "84 00'05 "40
* Ini ndinonzwa zvakanyanya »c: maminetsi, masekondi uye zana remazana ekunonoka
Kunyange zvakadaro pakanga pasina chikonzero chekuita bvunzo idzi, sezvo uchingori nehutariri iwe unogona kuona hunyoro hweUbuntu pakatarisa uchienzaniswa nekunonoka zvimwe zvakati wandei muWindows. Ndinoomerera, havasi bvunzo dzepamusoro, asi zvakapusa, asi vanojekesa kuti muWindows 10 zvese zvinononoka zvishoma (neizvi handireve kuti iWindows inopomerwa kunonoka seVista, yakaipa kana ichienzaniswa Ubuntu inononoka zvishoma).
Kuisa Windows 10 padivi peUbuntu 16 (iine uye isina UEFI)
Kana basa rako kana software yaunoshandisa ichiita kuti utarisire paWindows 10 uye iwe unoda kuve necomputer nayo ese ari maviri masystem anoshanda pakombuta imwe chete, usazvidya moyo, isu tinokuratidza maitiro ekuiisa. Kazhinji, kana iwe wakatenga komputa nayo, ichauya neWindows pre-yakaiswa, uye uyu mukana unozotiponesa mamwe matanho muchikamu chino. Kana Windows isina kuiswa, isa pakutanga kuti GRUB irege kumuka uye inyorwe neWindows loader.
Aya matanho achakubatsira iwe kana iwe uchida kuisa imwe distro seLinux Mint, Debian, openSUSE, nezvimwe, iine Windows uye neEFI / Yakachengeteka Boot.
Windows 10 uye saizi
Zvakanaka, kana iwe waisa Windows, ndinofungidzira wagadzira nzvimbo yeUbuntu Linux partitions. Kana usati waita saizvozvo kana kuti yatouya neWindows pre-yakaiswa, inguva yeku resize yako Windows partitions kuti uwane imwe nzvimbo yeUbuntu. Marii yekusiya? Zvakanaka izvo zvinoenderana nezvamunoda, kana ukashandisa zvimwe Windows 10 kupfuura Ubuntu, uchafarira kusiya chikamu chakakura cheMicrosoft system uye zvishoma kuUbuntu uye kana chiri chakapesana, saka unofanirwa kusiya chimwe chinhu kuUbuntu. . Kuti tisabatise minwe yedu, ndiri kuzogadza zvidiki zvinodiwa kune imwe uye imwe uye kubva ipapo chero chaunoda ...
GPU: DirectX9 inoenderana Inotsigira 1366x768px resolution
Para shandura Unogona kushandisa chaiyo software yeiyi, imwe Live Live iyo inobvumidza iwe kuti uzviite seGParted LiveCD, nezvimwe, asi chinhu chiri nyore kuzviita nechishandiso icho Windows 10 chinopa icho. Enda kuCortana uye nyora "partitions", inofanira kukupa sarudzo "Gadzira uye fomati hard disk partitions" kana enda kuSystem zvishandiso uye kubva ipapo Kuchengeta uye kuwana sarudzo dzehutungamiriri. Iwe uchaona chimwe chinhu senge chinotevera uye kana iwe ukadzvanya pachikamu (bhokisi pazasi) nekobhuru bhatani rinokupa sarudzo yekudzora «Deredza Vhoriyamu» uye isu tinozoishandura.
Mune yangu nyaya ndakaderedza kusiya 60GB yemahara yeUbuntu. Ok, kana izvi zvaitwa, isu ticha tangazve komputa uye pinda BIOS kana UEFI, zvinoenderana nesystem yedu. Kuti upinde muBIOS / UEFI iwe unofanirwa kumanikidza Delete kiyi kanoverengeka chinhu chisati chaonekwa pachiratidziro paunotanga komputa. Pane mamwe makomputa, senge yangu nyaya, unofanirwa kumanikidza F2 pachinzvimbo chaDel Unogona kuona bhuku rekombuta yako kana mamaboardboard kwaunowana nzira yekuzviita, kana isiri Del kana F2, unogona kuyedza dzimwe sarudzo saEsc.
Dhawunorodha Ubuntu uye gadzira iyo yekuisa midhiya
Chinhu chekutanga kuenda iyo Ubuntu webhusaiti kurodha pasi ISO yeiyo distro mune vhezheni uye flavour yaunoda. Iwe unofanirwa kutarisa iyo MD5 sum kana iwe wakashandisa iyo yakananga kurodha pasi, asi ini ndinokurudzira kuti iwe utore iyo kuburikidza neBitTorrent uye nekudaro dzivirira iyi nhanho, nekuti inoitwa otomatiki kuratidza kuti kurodha kwacho hakuna kushatiswa kana kushandurwa.
Kana uchinge watora pasi, unogona kupisa iyo ISO kuDVD neyako yaunofarira software. Izvo hazvigone kuve nyore, saka unenge uine optical disk yakagadzirira kuiswa. Imwe sarudzo, inova iyo yandasarudza, ndeye shandisa pendrive inokwana 2GB size yekuisa kubva kuUSB. Iyi yechipiri sarudzo inonyanya kukosha kumakomputa asina Optical drive Kugadzira iyo yepakati, unofanirwa kushandisa software yakakodzera, semuenzaniso Rufus, yeWindows, Unetbootin, PendriveLinux, Win32 Disk Imager, Linux Live USB Musiki, nezvimwe.
Kana iwe uchizviita kubva kune imwe distro Linux, unogona kushandisa Startup Disk Musiki kana usb-musiki, iyo yaunofanirwa kuisa uyezve kubva kune yayo graphical interface iri nyore. Isa iyo pendrive, uye wobva wasarudza nzira yeiyo ISO uye yakakodzera pendrive kana USB drive. Dzvanya paGadzira ... bhatani uye mirira kuti riitwe. Kamwe kwapera, iyo yekuisa peni ichave yakagadzirira.
Kana iwe ukafunga kuzviita kubva Windows, unogona kushandisa PendriveLinux, iyo iwe yaunowana mairi dandemutande iri Kuti uishandise nenzira imwecheteyo sepamusoro, sarudza iyo ISO mufananidzo, inoenderana USB drive uye gadzira iyo yekuisa midhiya. Mira uende ...
Chero zvingave zviri zvepakati, izvozvi iyo nguva yekuiisa mune iyo Optical drive kana kuiisa mu USB chiteshi usati waenderera nematanho anotevera ...
Kana timu yako ikaramba ichishandisa Chinyakare BIOS, ipapo maitiro acho ari nyore, iwe unongowana iyo Setup menyu sezvatakambotaura uye kamwe mukati mukati enda kune Yepamberi BIOS maficha sarudzo uye mukati iwe unogona kuwana iyo Boot Priority sarudzo, uye iwe unofanirwa kuisa chishandiso kwazviri sekutanga Boot Midziyo sisitimu yekushandisa kuti iiswe, inova tsvimbo ye USB, yekunze hard drive, CD / DVD, nezvimwe. Saka iyo system ichatarisa ipapo kutanga iyo inosimudzira.
Asi kazhinji iyo nyowani michina Ivo vanowanzo shandisa Phoenix BIOS (Mubairo-Phoenix) kana AMI pachinzvimbo cheiyo Chaiyo Mubairo, saka chinongedzo zvacho chakati kureruke uye chazvino uno, ine tebhu inonzi Bhoot kwaunofanira kupururudza uye apa iwe unogona kuchinja kukosha, kuisa Chekutanga, iyo svikiro kubva kune iyo system kuti iiswe inofanirwa kubhodhi kana kutsvaga. Kana uchinge waseta, pinda F10 uye wobuda uchichengetedza shanduko kana enda kuEtit tab uye chengetedza shanduko kuti ubude ...
Maitiro eEFI (ine Yakachengeteka Boot)
Kana iwe uine yazvino system, iwe uchave uine UEFI uye Yakachengeteka Boot inogoneswa yeWindows. Chinhu chinodiwa neMicrosoft masisitimu anoshanda kubva kuWindows 8 kunyangwe hachina kukosha, ndiko kuti, unogona kuisa Windows 8 kana Windows 10 pane system isina UEFI, uye nekudaro isina Yakachengeteka Boot, isina matambudziko makuru. Ndokusaka chikamu chakapfuura ...
Mune ino kesi, iyo nyaya inova yakaoma kuomarara, asi usazvidya moyo, zviri nyore, iwe unongofanirwa kutora mamwe matanho mashoma, hapana chimwezve. Mune mamwe masisitimu eEFI inogona kuve chimwe chinhu chakasiyana kubva kune vamwe sezvazvakaitika nemaBIOSes echinyakare. Zvatichafanira kuita kuita kuti iyo Chengetedza Boot uye gonesa iyo Legacy modhi kuitira kuti iite seBIOS uye ikwanise kusarudza nhepfenyuro ichibva yaiswa nenzira imwecheteyo sezvatakaita muBIOS, asi iwe uchaona kuti muEFI haina kuoneka pakati pesarudzo dzeBoot , chete yazvino Windows chikamu.
Kuti dzimwe sarudzo dzionekwe, muEFI system senge mufananidzo uri pamusoro, unogona kuenda kuTecurity tab uye kudzima Yakachengeteka Boot. Mune zvimwe zviitiko senge yangu, menyu yacho yakati siyanei uye ini ndaifanirwa kupurudzira kuenda kuSecurity uko kuti ndidzivise Bhokisi rakachengeteka ndobva ndaenda kuBoot tab yekumisikidza Fastboot ku Disable uye CSM kuti iise iyo Enable. Zvino buda neF10 uye chengetedza shanduko kana enda kuExt uye uite zvakafanana nezvaungaita nekiyi F10.
Iwe uchaona kuti komputa yako inotangazve, inopindazve muEFI uye scroll back to the Boot tab, ikozvino iwe uchaona kuti iwe unogona ikozvino sarudza sarudzo yekumhanya kubva kuUSB kana Optical drive, nezvimwe. Sarudza iyo yakakodzera mune yako kesi zvichienderana nekuti iwe unoda kuiisa kubva kune pendrive kana USB kana kubva kune yemaziso svikiro. Kamwe zvakare, F10 kana Buda kuti ubude mukuchengetedza shanduko uye izvozvi, kana USB yako yakabatana kana iyo optical disk yakaiswa muchikamu, ichatanga kukupa iwe kupinda kune iyo Ubuntu yekumisikidza system (kana chero imwe distro).
Kuisirwa Ubuntu 16.04 LTS kana yako distro ...
Kana zvese zvikafamba mushe, iwe unofanirwa kuona iyo Ubuntu yekuisa maneja iyo ichakutungamirira mumatanho akapusa ekuisa iyo distro pakombuta yako kwaunogona kusarudza mutauro, nguva yenguva, dhizaini yekhibhodi, nezvimwe.
Rangarira kuti kuva ne imwe sisitimu yekushandisa yakaiswa pane imwechete hard driveMune ino kesi Windows, unofanirwa kusarudza sarudzo yakakodzera kuti usaibvise uye kuti vese vanogara pamwe chete. Kana iwe uine ruzivo iwe unogona zvakare kusarudza dzimwe sarudzo senge yekupedzisira kuti uzvigadzirise zvishoma, asi yekutanga sarudzo yakaringana.
Kumirira kwechinguva uye kana wapedza iwe uchakwanisa kuona desktop yako kekutanga. Makorokoto! Unotova nazvo Ubuntu 16.04 uye Windows 10 pane imwechete diski mbiri-kubhururuka kubva kuGRUB. Paunotanga iyo system iwe uchaona iyo GRUB inooneka ichikubvumidza iwe kuti utange kubva kuUbuntu kana kubva kuWindows sezvaunoda nguva dzose.
Ini ndinokurudzira kuti iwe udzokere kunogonesa iyo FastBoot sarudzo uye kudzima CSM muEFI, pamwe nekugonesa Yakachengeteka Boot. Pachave pasina dambudziko uye zvakachengeteka. Kana iri BIOS, unogona zvakare kuisa HDD kumashure seFisrt Boot Chidimbu uye kudzosera iyo USB kana Optical CD / DVD drive mune yechipiri nzvimbo ...
Usakanganwa kusiya zvaunotaura, mazano kana kusahadzika. Kana iwe uine chero dambudziko panguva yekuita isu tichafara kukubatsira. Ndinovimba ichi chinyorwa chakubatsira iwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Ubuntu 16.04 LTS vs Windows 10: nhanho-nhanho kuongorora uye kumisikidza
Gonzalez victor juan akadaro
yakanaka kwazvo posvo, farira chaizvo kuiverenga!
Pindura Gonzalez Victor Juan
Zvakanaka, kune yangu yekuisa haina kunditendera kuti ndibatanidze kune zvisina waya netiweki. Mushure mekuisa mutyairi uri mune ine huruva dhairekitori uye kutanga patsva uine lilo uye nekuchenesa iyo inofara grub2 iyo inopunzika, Ubuntu 16.04LTS yakaita kwandiri kunge bvunzo vhezheni yakafanana neyaDebian yakatambanudzwa pane yekupedzisira vhezheni. Mumaawa maviri chete ekushandisa ini ndakutumira iwe rekodhi nhamba yemabhagi meseji kwandiri. Ini handidi kugumbura vese vechitendero vateveri veCanonical nekuita chitsvene chekutaura kuti zvinondiyeuchidza zvakanyanya nekuwedzera kwekuyedza kwakakundikana kunonzi Windows Vista asi ndichadaro. Solution: fomati kupatsanura uye kuisa Vanofanira 2 kudzamara vaona kuti Ubuntu 8.4lts yakakundikana uye voizadza nezvimedu zvinganzi mapakeji ebasa mune ramangwana.
Pindura kuna R2D2
Zvinoita kuti iwe ude kuedza ubuntu, asi kubva pandinoisa Manjaro zvese zviri nani ...
Pindura kuna matmu
Ndiri kuda kunongedzera kumutongo unotevera: «Iniwo ndinofanira kutaura ndichipesana neiyo icon yeAmazon yandinetsa». Wakafunga here kuti Windows ine yakawanda junk software yakaiswa nekutadza?
Kuenderera mberi nekuenzanisa mukati Windows 10, Grove anoshanda nemazvo kana ane matambudziko ekurangarira? Iko kubatana kune wifi (kunyanya kune yakavanzika SSIDs) kuri kushanda zvakanaka? uye muUbuntu 16.04 (yakatama kubva pa14.04) OpenCL inoshanda here?.
Iwo maparera eese masystem ayo kusvika parizvino ini zvandaisakwanisa kugadzirisa. Ehezve, ndinofanira kubvuma kuti Ubuntu 16.04 "inonzwa" yakawanda mvura kupfuura 14.04 uye Windows 10 ine gore rakanyatso kubatanidzwa.
Ubuntu 16.04 inoshandisa yakawandisa ndangariro muhupenyu, uye ine akati wandei zvisingawanzoitika mumbure
Zvakanaka, kana Windows 10 yainge isina: otomatiki ekumanikidza ekumisikidza, pre-akaisirwa mafomu ayo asingandifarire uye kufanira kutenderera ndichiremadza pakavanzika tangle… ndinenge ndichiishandisa.
Ini ndinofarira ayo aesthetics, iyo yekuzivisa pani, yebasa bhaa, iko nyore kwekushandisa kuita zvakajairika mabasa, nezvimwe ...
Parizvino ndinonzwa kugadzikana ne16.04, zvakwana uye ndine zvakakwana kuti ndiite ese mabasa angu uye zvakare zvakanyanya "minimalist" kupfuura Windows 10 (izvi zvinoita kunge zvakashata uye ramshackle).
Kuti kana mune yekushongedza chinhu Windows 10 ine yakanyanya kunaka uye inoratidzika dhizaini pane Ubuntu.
Iko kuenzanisa kwakanaka zvakakwana, asi pane chakakanganisa kwekutanga. Kana iwo maviri mashandiro masisitimu ari pane imwechete hard drive uye iro rakaoma dhiraivha haisi SSD. Imwe sisitimu inomhanyisa imwe nekuti kuverenga kwacho kunokurumidza pachikamu chemukati pane chikamu chekunze che diski.
ER KAVRA akadaro
Kune rimwe divi ini handifunge windows 10 iri nani sisitimu yekushandisa pane windows 8 kana ubuntu nekuda kwechikonzero chiri nyore chekuti ndanga ndichitarisa kubva pre pre compilations ye windows 10 (kutenderedza kuvaka 10130 zvichienda mberi), uye ndiko kuti OS iyi yanga iri kuuya kubva ipapo kudhonza madhiragi nemawindows defender ayo anoita kuti ishandise rakaomarara diski zvakanyanya, kugutsa kuverenga kwayo / kunyora kugona zvichikonzera kurovera kudiki uko dzimwe nguva kwakandimanikidza kuti nditangezve. Imwe mhosva ndeyekuti pese pandinenge ndichida kubatana neWi-Fi ndinofanira, kubva kusarudzo dzekumisikidza. network zvidzivise uye umise zvekare zvakare. Uye pakupedzisira zvinofanirwa kutaurwa kuti sezvo windows 8 uye w10 zviri padhuze nepadhuze nepadhuze maererano nedesktop interface, ini ndinofunga iyi OS isina kupedzeredzwa yezvinhu senge maviri ekudzivirira mapaneru.
Kune rimwe divi, Ubuntu, iyo yandisina kushandisa kubvira v14.04, ndinofanira kutaura kuti yanga ichivandudza pamusoro pemakore mana apfuura kubvira v4 fiasco; asi pachezvangu ndinofunga kuti UNITY YAKANAKA ZVAKAIPA sezvo ichishandisa zviwanikwa zvakawanda (ndosaka ndichida ubuntu mate) uye zvinoitawo kunge zvakashata, kunyangwe ini ndaona mumifananidzo iyo mu v12 iyo UNITY yakatokwenenzverwa asi zvakadaro hazvindibvumidze. Chinhu chakanaka ndechekuti chiitiko changu chekupedzisira neUbuntu chaigutsa, Ubuntu yakatomira kuWindows kwenguva yakareba, kuenderana kwehardware kuri nani zviri nani. Saka nekuda kwematambudziko nemawindows uye ongororo yakanaka yeiyi nyowani ubuntu ini ndiri kuzoshandisa seiyo huru OS uye ndinofunga zvichatora nguva kudzoka kumahwindo nekuti zvakandishungurudza zvakanyanya.
PS: kunyangwe rakanaka sei linux, ini ndinoona kuti windows ine chimwe chinhu chinokwezva vanhu vazhinji, kunyangwe windows isiri nani. Ini ndinopedzisa nekutaura kuti ndakashandisa ese maOS kusvika pamwero wakaenzana asi ini ndagara ndichida Windows zvakanyanya nekuda kwemitambo uye zvimwe zvirongwa; kunyangwe Ubuntu yagara ichigutsikana neni zvakanyanya sechishandiso chebasa uye mashandisiro ezuva nezuva, kunze kwekupararira 12 ne13 kwandinoenzanisa neWindows Vista.
Pindura ER KAVRA
Das Pedyo akadaro
Iwe murume, ini handina kubata muchina mumwe nema windows 10 anoshanda nekukurumidza, ndinofanira kutaura kuti kana iwe ukaisa 64-bit vista uye 10-bit windows 64 zvakare, ndinokuvimbisa kuti vista inokurumidza.
Unotenda kana kwete, ini ndakatoita bvunzo pamachina akati wandei uye zvechokwadi windows 10 inosemesa, inotanga nekukurumidza pamachina matsva achienzaniswa nevista, asi kana zvasvika pakurodha mapurogiramu, windows 10 inonyatso kurasika.
Ini ndinoteerera kune zvaunotaura, bvunzo dzave paDell inspiron 3421 2gb ram 3rd chizvarwa pentium dualcore processor, Apple macbook pro 2013, Asus ASUS X751LX core i7 5th chizvarwa, 8gb Ram.
Ini ndashandisa Windows 10 pro 64bit uye Windows Vista 64bit
Pindura Das Pedyo
Ini ndinofunga chinhu chakanakisa kuve ne ubuntu semushini mukuru, uye windows mumuchina chaiwo.Ichokwadi ichokwadi windows 10 inoita kuti hard disk iende ku100% pane sevhisi inonzi telemetry, iyo inoita kuti iiswe pa100% uye iyo cpu Zvinomuita kuti ashande zvakanyanya, ndinoziva nekuti paakamanikidza kupera kweiyo sevhisi, tembiricha yakadzikira
Fabian Valencia akadaro
husiku hwakanaka ini ndoda rubatsiro ndapota ndine windows 10 pro 64 bits yakaiswa pane hp 1000 laptop, dhawunorodha ubuntu zvakananga kubva kune chinongedzo chinowoneka pano isa iso pane usb uchishandisa rufus, kana uchitanga pc inoziva mudziyo wakadai Pasina zvimwe zvandinofunga ndinofunga imhaka yekuti ini ndaive nayo mubios uye ndinoipa install ubuntu, ini ndinosarudza mutauro uye ndobva ndawana meseji inoti panotova nehurongwa hwunoshandisa uefi iyo kana ndikaenderera neimwe yeanoshanda masystem inogona kurasikirwa, zvinondipa sarudzo yekuenderera muefi kana kudzoka, ndinozvipa mune zvingasarudzwa zviviri ndobva ndawana sarudzo yekudzima diski uye zvese zvandinazvo zvinorasika, ini handiwani sarudzo inoonekwa pano , Ini ndinoda mahurongwa maviri anoshanda ezvinangwa zvakasiyana uye mune imwechete laptop inogona kundipa sarudzo yekugadzirisa izvo uye kukwanisa kushandisa zvese zviri zviviri.
Pindura kuna fabian valencia
Ndokumbirawo, kuti tikwanise kukubatsira, edza kupa ruzivo rwakawanda sezvinobvira. Kune rimwe divi, ini handizive kana iwe wakateedzera nhanho uye wakadzora chikamu kuti usiye nzvimbo yemahara yekuisa Ubuntu. Kana usati wamira uye iwe uri kuyedza kuiisa, Windows ichadzimwa sezvo sisitimu inokuzivisa ... Dambudziko rako rinogona kunge riripo.
Anya lilyod akadaro
Usaomesere hupenyu hwako, shandisa chaiwo michina. Kana iwe wakaita seni unofanirwa kushandisa zvigadzirwa zveAdobe zvakanyanya, uye zvirongwa zvakati wandei zvevashandi zvinoshanda chete paWindows, zvirinani kuve neGNU / Linux mumuchina chaiwo. Kune izvo izvo sisitimu inogona kuita, haidi yakawanda uye inoshanda kupfuura kugadzirisa Windows, nekuti kana uchizopa vhidhiyo kana kutamba mitambo yemavhidhiyo yepamusoro muWindows, zviri nani kuzviita natively.
Kana iwe uine Nvidea kana AMD kadhi, uye urikuenda kunotamba kana kupa vhidhiyo, zviri nani kuzviita paWindows. Iyo vhezheni yeSteam yeGNU / Linux yakadzikira zvakanyanya kupfuura vhezheni yayo yeWindows, iri kusvika pa50% nekukurumidza (tisingataure kodhi yemavhidhiyo mutambo weWindows uchienzaniswa neGNU / Linux). Iyo Blender paWindows inopedzisa kupa kwakawanda kare kupfuura paGNU / Linux nemahombekombe akakura uye imo nekuti Windows-yakagadziridzwa GPU nemadhiraivha emagetsi anoita kuti zviitike.
Mune yangu nyaya kwaive kurwadziwa kuti ndinofanira kutanga uye nekuchinja mashandiro ehurongwa nguva dzese. Izvo hazvina hutano, izvo zvinongomuita iye anopenga.
Zvakare, mune yangu chaiyo kesi, iyo GNU / Linux mifananidzo inoshanda zviri nani kwandiri mumuchina chaiwo pane nenzira yemuno. Sezvo natively iyo isingandipe iyo chaiyo resolution uye ini ndinofanirwa kutenderera ndichishandisa xrandr uye cvt mune iyo terminal, kuwedzera kune yekugadzirisa masystem mafaira semidzi uye uchiita bash kuitira kuti kumisikidzwa igare uye isarasike, Mune chaiwo muchina ne iyo VM Zvishandiso kana iyo Yevaenzi Kupindwa muropa uye izvo zvinogadziriswa. Ipapo odhiyo natively inondipa matambudziko nealsa uye pinda odhiyo, uye ini ndinofanirwa kutenderera ndichiisa yakawanda yekutsamira mune iyo terminal kuti kuti odhiyo ishande nemazvo. Mumuchina chaiwo, zvinoita sekunge mutyairi weruzha akaenzana saka handifanirwe kuomesa hupenyu hwangu ipapo.
Pindura Anya Lilyod
EHE ZVAKANAKA NDAKAZVIWEDZA ZVESE, ASI IZVI NDICHAZOSIMBISA, NDOONA KUTI CHII CHINONETSA CHINOMUKA
Emerson Goncalvez akadaro
Zvakajeka, uye ndinozvitaura mushure mekushandisa Linux kwemakore gumi, zvinonakidza kunyora tsamba, asi kune zvimwe zvishoma, zvinonyadzisa kuti vateveri vemahara software vanogara vachitinyepera uye vanyepe kune avo vanopinda Linux uye izvo, seni, pakupedzisira vanorega kuishandisa nekuti vaneta nekushandisa hupenyu hwavo mugoogle kugadzirisa kusakwana kwe linux
Pindura kuna Emerson Goncalvez
Joseph Molina akadaro
Ndine windows 10 32bist uye ubuntu 14.04lte 64bist. Ivo vaviri vanondishandira sekuda kwangu asi ndiri kushandisa Ubuntu seyakanyanya sezvo zvakachengeteka kutarisa paInternet, kurodha pasi, nezvimwewo kunyangwe ini ndiine avast mune yakazara vhezheni muWindows 10.
chisina kunaka chehunhu ndechekuti ndinodya gondohwe rakawanda kunyangwe ndine 4gb yegondohwe, ndakangokwanisa kushandisa 3gb nekuti ndinomhanya akawanda browser windows.
mu ubuntu ingoisa chromium, vlc, jdownload, .rar decompressor uye ini ndine zvinyorwa kusvika pari zvino., chromium haigamuchire Flash yeAdobe uye ndinofanira kushandisa firefox nekuti inomhanya adobe flash.
ubuntu ndiyo linux yekutanga isingamire chando, ini ndanga ndamboedza fedora (kare kare) uye munguva pfupi yapfuura linux mint yazvino vhezheni yakanamatira kwandiri kusvika suse yakavhurika yakanamatira kwandiri kunyangwe yaingova gnome.
Ini ndaida kuisa debian nekuti zvinoenderana nayo ndiyo yakagadzikana asi ini handina kukwanisa kuiisa nependrive uye ndaifanira kuisa ubuntu.
yakakosha 2 duo e7500 2.93ghz
yakabatanidzwa vhidhiyo intel G41 128MB
Pindura kuna Jose Molina
Javier Prada akadaro
Mhoro zvakanaka ... ndarasa win8 uye ndafunga pane ubuntu 16.04 ... kubva kumaneja (izwi, kugona) ini ndave kurodha pasi wps kubva ku kinsgsoft ... ndakaisa atomu uye sublime ... ndakagadzirira wifi printer ye makapu pane nhunzi, ini ndadzokororazve nyaya dzekubatana uye chokwadi ndicho chakanakisa ... ndinodzokera kuUbuntu kubva mushanduro yegumi nembiri ... uye ndinonzwa kugadzikana nekushushikana kwemuchina ... kunyangwe iri yechipiri chizvarwa musimboti i12 ...
Pindura Javier Prada
Ubuntu 16.04 yakashandurwa kune yangu laptop yaive ichindinonokera pasi neMint sinamoni pink! asi pandakaedza kuisa Ubuntu ndakakanda benzi chikanganiso chakandinyadzisa ubuntu uye kuti mugadziri akange atyora ndapota chenesa cd uye shandura yekare hard disk hahaha izvo zvisina maturo, pachinzvimbo tora Kubuntu 16.04 uye zvese zvakanaka pasina matambudziko, chaizvo izvo zvinonyadzisa neBuntu.
Usanyadziswe muUbuntu kune imwe yakatarwa uye inoshamisa meseji, asi kana iwe uine yakati rekare diski, Ubuntu ichiri nani pane Kubuntu kana zvasvika pakomputa zviwanikwa.
Pindura kuna Alberto Urzúa Aravena
Ndine Windows 7 uye Ubuntu 16.04 yakaiswa pane HP EliteBOOK 8440p uye ese ari maviri anomhanya chaizvo, kunyangwe ini ndiri mutsva kuUbuntu uye ini ndisina kujaira kupinda mirairo (mazuva ese ini ndinopedzisa neimwe kana imwe yakaputsika package) ndinofunga izvo zvishoma nezvishoma ndichajairira. Ini ndichamirira kusvika Chikumi kuti ndigadzirise kune W10… Ndinovimba zvese zvichafamba mushe.
Ndakaedza Ubuntu 16.04 LTS uye haina kundipa matambudziko, ini ndiri novice linuxer asi ndinoda kuramba ndichidzidza kubva kune chero kugoverwa kweLinux senge maFree Software kunyorera.
Ini ndakaisa ubuntu 16.04 pane HP 250 G4 Intel Celeron N3050 / 4GB / 500GB / 15.6 ″ (inouya nekumira pasina inoshanda system). Ini ndakachinja iyo HD (500GB) yesata3 ssd uye inoshanda zvakanyanya mushe. Inoziva ese Hardware inosanganisira Bluetooth 4.0, wifi, ethernet, kurira, nezvimwe. zvese. Zvakandibhadhara 259 maEuro. Iwo anovandudzwa anoisa nekukurumidza uye haambokundikani Ndiwo ruzivo rwangu. Ndakaedza kuisa FreeBSD 11 zvazvino asi kusvika Freebsd 11-RELEASE yabuda ini handizoyedze zvakare nekuti haina kuziva zvakawanda zvezvinhu. Iyo laputopu iyo ini ndichangobva kutsiva neDell Inspiron yandinayo makore masere apfuura. Ini ndanga ndisati ndashandisa Ubuntu asi ndiri kufara kwazvo nemhedzisiro. Makorokoto kune vanogadzira, ivo vanovavarira kuvandudza madhiraivha eanenge ese madhizaini. Kwandiri yakafanana neWindows, asi yakagadzikana, inokurumidza uye yakachengeteka. Iyo processor inobva kumhuri yeBraswell ine kuseka kwakaderera simba rekushandisa. Shuwiro yakanakisa
Mhoro Cesar. Ndine laptop imwechete asi zvinondipa matambudziko neUbuntu 16.04. Iyo wifi inoenda yakaipa uye nguva nenguva iyo komputa inongoerekana yavhara. Iwe unayo chero ruzivo nematambudziko aya?
Mhoro Cesar. Ndine laptop imwechete asi zvinondipa matambudziko. Iyo wifi inoenda yakaipa uye nguva nenguva iyo komputa inongoerekana yavhara. Hazvina kuitika kwauri here?
Rodrigo E. Lopez akadaro
Shamwari dzakanaka kune vese, zvipo zvakanaka uye makomendi, posvo inotonhorera, ndakakuudza kuti ndaive nematambudziko ekuisa iyo ubuntu mune compag presario ine 3 ram kune chirongwa uye chokwadi ndicho chakareruka OS asi haina kundipa zvinopfuura 1 gondohwe uye tsime rakaitika kweanenge mazuva matatu ndakachinja dimm kubva pa1 kusvika pa2 gb uye zvakaitika kuti ndakaverenga 1.7 gb zvakadaro ndakazvishandisa seizvi kuburikidza nezvose zvinyorwa uye makomendi uye kutsvagisa kwepamberi kwemaitiro ekumisikidza mumakumi matanhatu nematanhatu imwe yacho maviri akazove kuti hapana chaive kana bios kana Software kunyange kukatanura imwe pc ndakaburitsa yayo masere yegondohwe uye zvakanaka ndakaverenga 64 ye1.7 yegondohwe ndikati sei? Zvakazoitika kuti handina kuverenga slot iyo Hardware yandakataura zvakanaka ini ndinoburitsa dim re 6 uye ndinoimanikidza kuti riverenge, zvakanaka ipapo parinoenda handitange imi.
Uye ini ndakati hazvigone kuchinja dhimoni kuti riite slot 1 uye kana ndikatanga na3.7, ndati zvakanaka kwete kuti madzimai anotarisa system chengetedza yakachena nekugadzirisa yangu os 16.04 lts ubuntu uye mhedzisiro shamwari mushure mekuisa zvakare gondohwe 3 mu dimm samsung (ziso dhi rakapfuura re2gb raibva ku kingstong) uye kana ndikaverenga iyo 3 yegondohwe handisati ndawana hukama asi kune avo vane makomputa ane inopfuura 1 dimm uye anopfuura maviri gondohwe uye iyo ubuntu haina kuverenga ndangariro yayo iyi inogona kukubatsira kana ini ndikawana murejista zvimwe kukanganisa kana zvimwe zvisina kumira mushe ini ndinotumira kwaziso ndinovimba zvinokushandira iwe.
Cherekedza ** makumi matatu nematatu anosvika ku32gb 4 mabiti anopfuura 64gb zvirokwazvo kugona kwebhodhi reamai
Ini ndinosiya rairo = ubuntu @ ubuntu1604lts $ sudo dmidecode -t memory | grep Kuwanda
Pindura Rodrigo E. López
Kuwedzera hakuna kujairika asi zvinoitika chinja chinzvimbo chako dimm kana chiise kuti uone kuti ndeipi isinga verenge uye shandura dimm yako 1 kusvika 2 uye zvinopesana tanga laptop yako uye tichaona zvinoitika. nezve ..
Zvakanaka! Ini ndine ese maUS akaiswa, uye chokwadi ndechekuti ini handisi kunyunyuta. Ko kana Win10 ichindinetsa, ndeyekuti inotaura sei zvakavanzika chinhu, izvo, ini ndatozvigadzirisa zvese izvo. Uye ndinobvumirana newe nezveiyo Amazon Icon.
: v Ini chete ndinocherechedza akadaro
Baia Baia, anti-Microsoft peji. : v
Pindura kuna: v Ini chete ndinotarisa
Kuedza kushandisa Ubuntu seyakakosha uye Windows senge rutsigiro, asi ini ndinofanira kusiya, mashandiro asinganzwisisike eiyi vhezheni inorembedza iyo system pasina ziviso yapamberi uye inondisiya ndakarara nesystem ichishanda, ivo vanosarudza zvinopesana; Ini ndinotofanira kutsvaga imwe yazvino linux system inoshanda kana uku kukundikana kana kushandisa windows uye ndosiya linux sekutsigira; Zvinorwadza kuti ndinofanira kudzokera kumahwindo, ini handizvifarire asi zvakadzikama uye zvirinani kuti handiende pazororo ndisina kunyeverwa, pane zvirongwa zvekare zvandinotsamira pamahwindo uye ndaisada chisiye ichi, asi linux haigarike zvakanaka uye ndakamirira mwedzi mishoma ndisati ndatamira kune yakadaro asi Canonical yakaodza mwoyo uye ikashamisika zvakare, sei mushure memwedzi yakawanda yekumisikidzwa kwayo inogona kusagadzikana?
Zvakajeka kana iwe ukasabhadhara, iwe hauna chero chinhu chine mhando yepakati (windows haivimbise kushanda kwakanaka, asi zvirinani kugadzikana), zvinosuwisa sei kuti yekare kune yekare windows 3.11 haigone kuwana izvo zvangu 5 ine 32 GB ye RAM kuita kwakakwana.
Izvo hazvisi zvechokwadi for a curious eccentric uyo zvinosuruvarisa zvinoitika
Ndine komputa ine Ubuntu yakaiswa, makore akati wandei ekushandisa uye ndiri kufara neiyi OS.
Kusava nechokwadi kwangu kune imwe komputa. Mune ino yechipiri komputa, iyo ine ma diski maviri, windows 10 yakagara yakaiswa (pane iyo SSD diski) uye pane imwe SATA disk (1 TB) kunouya iko kupora kupatsanura. Ndinoda kuisa Ubuntu pane ino yechipiri disk, kunyangwe ndikarasikirwa nekumhanyisa kuverenga. Mubvunzo wandinayo ndewekuti mushure mekutevera nhanho dzaunotaura mune ino positendi ndichave nematambudziko nehubhu mbiri. Ndakaverenga kuti kugonesa Nhaka uye kuremadza Yakachengeteka Boot zvinogona kukonzera windows 10 isingawanikwe.Ndinoda kuve nechokwadi ndisati ndaita sarudzo.
Mumwe mubvunzo wandinayo ndewekuti: ndinofanira kugadzira iyo bootable USB ine yakatarwa tsananguro yeMBR kana GPT?
Anel mamita de Dios akadaro
Ndiri kungotsvaga bonde ndine makore 16 ndiri mukadzi ndine magaro akanaka uye shezi, ndinoda munhu anondiremekedza uye anondida zvechokwadi kwete sababamunini vangu vanongoda umhh haa asi ndakatovaudza kuti tinogona 3 vana uye anoomerera pakuda kuzviita zvakanyanya.
Ndiri kutsvaga hukama hwakakomba hwehukama hwakanaka, kuziva nzvimbo uye kutarisira maropafadzo angu, chokwadi ndechekuti ndiri muchirongwa asi handinzwisise ndosaka ndiri kutsvaga kuti andide uye azive maitiro chirongwa chekubatsira
Kuti uwane rumwe ruzivo ndifonere panhamba yangu yefoni 6641980952 ndeyeshamwari yangu, nekuti ini handina nhare parizvino imwe yemaropafadzo angu akaityora
Kana iwe uchida kuona muviri wangu kuti ugogona kundiziva, ini ndine mamwe mavhidhiyo pama xvideos kuitira kana iwe uchida kukwira, iyi ndiyo imwe kubva kuma xv makore angu, ndinokumirira iwe, hazvina basa izvo unondida uye unondida seni ndinokuitira makomborero ndatenda nekuverenga nditumire joko kuti ndikwanise kubuda, ndinosiya maropafadzo angu kuna amai vangu kuti pasave nematambudziko uye ndinogona kurara mune mumwe mubhedha nekuti diki kwazvo senge babamunini vangu pilin
Pindura kuna Anel mamita de dios
Mhoro: mumwe mubvunzo, mushure mekupedza kuisirwa Ubuntu, ndingaite sei kuti ndidzokere mukati windows? Sezvo main boot disk iri usb kana cd.
Juan Manuel Serrat anochengeta mufananidzo akadaro
Mhoro, hongu, yakawanda yekushandisa system asi mumwe munhu akaona kuti kune musikana mudiki arikumupa makomborero. Santos Ubuntus ... hahaha ini ndinoshandisa ese mashandiro ekuvandudza, asi mune yangu ruzivo Ubuntu iri yepamusoro maererano nerudzi urwu rwebasa. Windows ndeyemabasa epamba nemitambo. Anel mamita de dios OH SIIIIIIII ndinokudana uye ndinotsvaga iwe matako uye kana ndikakupa vana vatatu hahaha
Pindura Juan Manuel Serrat
Ndatenda nechinyorwa, ndanga ndichitsvaga fananidzo ubuntu 16.04 vs windows 7, ndine windows 7 uye ndinoshamisika kana zvakakodzera kuenda kumahwindo 10 kana zvirinani kuenda kuubuntu 16.04, sezvo windows 7 iri kutanga kuve yekare. Zvirinani windows 7 ine inogadziridza kana ubuntu 16.04 (inova nyowani)?
nzombe. Ini ndiri mainjiniya uye mashandiro enjiniya uye ini ndaigara ndichida kuda Linux nekuidzivirira pamberi pevanhu vaisambozviziva, asi chokwadi chinosuruvarisa ndechekuti handina rusarura uye pakupedzisira Ubuntu ichiri kutambura nemarara, inotonhora, zvikanganiso zveUI, kunonoka sezvakangoita paWindows. Ini pachangu, ini ndakatanga uye kumisa bvunzo uye pane yangu system uye ese ari maviri anotanga zvakafanana, imwe nekukurumidza kupfuura imwe kamwe uye zvinopesana dzimwe nguva.Kushandiswa kwe RAM kwakafanana futi, kunyangwe kubata kweizvi hakuna kujeka kwandiri ndiani zvinozviita. Kusuruvara kwangu kukuru ndokwandakamhanyisa bvunzo yekuita paGroovy Java uye python paUbuntu uye mazhinji acho akamhanya nekukurumidza paWINDOWS 10.
Ndanga ndichishandisa Windows hupenyu hwangu hwese kubva 3.1 kusvika 10 uye ini handina kana dambudziko. Ipapo ndakatanga kudzidza Networks uye ndipo pandakasangana neLinux, mune ino kesi CentOS, yaive makore manomwe apfuura. Ini ndaishandisa Ubuntu kweanenge makore mana uye zvaitaridzika kunge zvakanaka kwazvo, zvisinei ndakadzokera kuWindows (7 panguva iyoyo) nekuti maApplication andinoshandisa ndaisakwanisa kumhanya paUbuntu. Ipapo ini ndakaedza Mint ndikamhanya mune iro dambudziko. Ndakamhanya iyo inozivikanwa WINE uye hapana. Ipapo ini ndaive neW7 pamwe neMint 8.1, asi pakupedzisira ndakanamatira neW12. Nhasi ndanga ndichida kuyedza iyi vhezheni yeUbuntu zvakare sezvo ndiri kudzidza Programming uye ndiri kufarira kwazvo Bhash, zvisinei, nekuda kwekukanganisa muBios yangu (iyo yandisingakwanise kuona) haina kuziva kupatsanurwa uko Windows inogarwa, nzira chete yekumisikidza sisitimu iri kukanganisa pamwe nezvikamu muLinux asi zvinosuwisa kuti hazvindibvumidze kuisa system zvakare, handirangariri kuti kutadza kwaive chii. Mukupfupisa, ndinofunga kuti Linux inoshanda kune zvimwe zvinhu uye Windows kune mamwe mabasa, haugone kuenzanisa imwe sisitimu neimwe uye kuti yega yega inoita zvinhu zvakasiyana. Kune kambani inoda maseva, ini ndinokurudzira zvachose Linux nekuti neayo ine chengetedzo uye kugadzikana kwainovapa, asi zvinosuwisa kuti Microsoft ine monopoly yemazhinji maApplication aripo mumusika, iwo anonyanya kushandiswa mu Institutes, Masayunivhesiti uye Makambani, saka ini pachangu ndinokurudzira Linux kune mamwe mabasa uye Windows kune zvimwe zvese.
Mesosphere: iyo inoshanda sisitimu yedata nzvimbo